Amandla elanga xa ithelekiswa neminye imithombo yamandla ehlaziyekayo | Ukuhlaziywa okuluhlaza
UDaniel Palomino | | Amandla omoya, amandla ombane, Photovoltaic Solar Amandla
Onke amandla ahlaziyekayo anezibonelelo zawo, kunye neziphene zawo, kodwa uza kuthini xa uthelekisa amandla elanga kunye nezinye izinto ezivuselelekayo?
Umzekelo, kumandla ombane kunye namandla omoya kukho umahluko omkhulu xa kuthelekiswa namandla elanga.
Uninzi lwale ntlukwano lunokubonwa ngendlela eqhelekileyo kumazwe amaninzi azifakileyo, kodwa ukuba sijonga eSpain, lo mahluko mkhulu ngakumbi.
3 Amandla esola
Ukuthetha kancinci malunga namandla onke akhankanyiweyo, ndingatsho ukuba kwimeko ye- amandla ombane ngokuba namachibi okusebenza aneleyo ukuze velisa la mandla asinakufikelela ngaphantsi komzobo 20.000 MW.
Kodwa, kuhlala kukho kodwa, kunjengoko benditshilo, igama lomlingo apha "liyasebenza" kuba ayizizo zonke iindawo zokugcina amanzi ezinokusebenza Andibhekiseli kwiingxaki zokugcina okanye ukusebenza (eziya kubakho kwakhona) kodwa emanzini, ezo zinto zendalo kunye nezinqabileyo ezifunekayo ukuvelisa amandla.
Ngezityalo ezikufutshane nedama elithatha amanzi okunkcenkceshela, iimfuno ezisisiseko kunye nembalela eqhelekileyo yelizwe lethu okanye ubuncinci ngokuyinxenye, yenza amadama amaninzi angakwazi ukuqala.
Oku kuthetha ukuba nge la mandla awunakubalwa rhoqo Ngenxa yokuba iimeko zemvula kunye nokugcinwa kwamanzi ezifunekayo ukwenza iingxangxasi kunye nokuvelisa amandla afanelekileyo kufuneka kuhlangatyezwane nawo.
Kwelinye icala esinalo amandla eolicUkuba nezixhobo ezikhulu zezixhobo zamandla esinakho zivelise malunga ne-40% yetotali iyonke eziyimfuneko, ezinokulingana ne 23.000MW, kwaye ke sikwazi ukubonelela ngendawo enkulu yommandla waseSpain.
Nali elinye igama lomlingo osele unalo engqondweni, "umoya", ngaphakathi, ngaphakathi usuku ngaphandle komoya akukho nto iveliswayo kwaye esinazo kuphela zineeinjini zomoya ngaphandle kokwenza nantoni na.
Nangona kunjalo, kwaye andisazandisi ngezihlaziyo zangaphambili, sine Amandla esola.
Ayinamsebenzi ukuba izityalo zakho zivelaphi, nakweyiphi na indawo yaseSpain Amandla aya kwenziwa yonke imihla enyakeni.
ISpain lilizwe leLanga kwaye kufuneka silisebenzise ngandlela thile.
Apha uza kundixelela, akukho lizwi lomlingo kumandla elanga anjenge "cloudy"?
Ngokuqinisekileyo ewe, kodwa Nangona kunamafu, ukukhanya kokukhanya kuyaqhubeka nokufika Kwaye izityalo zelanga zinokuwasebenzisa loo mandla nawo, kuyacaca ukuba ziya kuvelisa amandla amancinci kunasemini enelanga, kodwa ziyayenza.
Kwaye "ubusuku"? Kule meko sinokuthi ukuba kuyinyani ukuba amandla elanga awasetyenziswanga kakhulu ebusuku, ndithetha ukuba akaveliswanga, kodwa kuyinyani ukuba ngeli xesha ibango lamandla liphantsi kakhulu.
Ukuba uyazibuza ukuba kutheni amandla elanga engaphuhliswanga ngakumbi nangaphambili xa kuthelekiswa namandla omoya, ndiza kukuxelela loo nto iindleko.
Sonke sijonga ezipokothweni zethu kwaye ukuba sigxila kuloo nto, iindleko zamanye nezinye zahlukile kakhulu.
Kuye kwaliwa ukunciphisa Kwaye baye behla kwiminyaka yakutshanje xa kufikwa kumandla elanga kodwa iindleko ziphezulu kunalezo zamandla omoya.
Umzali umzali kunenzuzo enkulu ukuphumeza amandla omoya amandla elanga ngaphandle kokubona uncedo olukhulu olukhankanyiweyo ngaphambili kwiintsuku ezininzi amandla omoya awazukuvelisa nto ngenxa yokunqongophala komoya ngelixa amandla elanga ethe gqolo kwimveliso yawo.
Ukongeza, singena kwezopolitiko ngendlela ecekeceke, andifuni ukuya kuphezulu ngalo mbandela ngenxa yezizathu ezahlukeneyo ke ndiza kukunika imivumbo emincinci.
Ukwazi iSpain, ukuba iindleko zamandla elanga zaziphantsi kunomoya, Kubonakala kum ukuba amandla omoya aya kuqhubeka ephumelela ngenxa Kungenxa yokuba olona luvo lokuba nemveliso yamandla eqhubekayo sesinye sezizathu zokuba kutheni amandla elanga ngamanye amaxesha emile.
Umzekelo ocacileyo unayo Murcia okhubazekileyo iminyaka nangona indawo enelungelo lokufakelwa kwamandla.
Kubonakala ngathi yonke into iya phambili kwaye indawo yokuma ime phantsi, kodwa imiqobo ebekiweyo iyamangalisa.
Ilizwe apho, nokuba kubonakala ngathi akukho sikweni, Ayivumi ngokuzithandela sebenzisa la mandla ukwenza "ukuzisebenzisela" kunye nokukwazi ukunciphisa amanani othusayo kwiintsapho ezininzi ze-invoyisi.
Ukuza kuthi ga ngoku ndize nalo mboniso wokugqibela kwaye nditsho nje ukuba nangona kubonakala ngathi ndithanda iLanga kuphela (ukuba likhatshwa yipikniki ebhetele kakhulu) akunjalo, ndibheja kuwo onke amandla ahlaziyekayo, ezinye zingcono kunabanye, nangona kuxhomekeke kwindawo abakuyo kwaye kufuneka ube nawo onke la mandla ukuze ukwazi ukubonelela wonke umntu.
Ngenxa yokuba ikamva liphinda lihlaziyeke
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhlaziywa okuluhlaza » Umoya ovuselelekayo » Photovoltaic Solar Amandla » Amandla elanga xa ithelekiswa neminye imithombo yamandla ehlaziyekayo
Kucacisiwe kakuhle kwaye, ewe, kakhulu kwisivumelwano noko kuthethwe ngako.
Sonke siyawazi umba wezopolitiko ... nangona kamva, kungaziwa ukuba kutheni, ayiboniswanga kwibhokisi yokuvota. Ngapha koko, sisezimvu koko kuthethwa ngabelusi
Enkosi kakhulu Carlos, ndiyavuya uyithandile.
Umcimbi ophambili kukuba kwaye ekugqibeleni izinto ezinokuhlaziywa kunye nezinye izinto zokuphucula umgangatho wobomi bethu zishiyeke ngasemva.
Abelusi, njengoko usitsho, abalunganga kakhulu emsebenzini wabo kwaye iSpain iyaqaphela ukuba kakhulu.
Ukuthelekisa namandla omoya ngokubhekisele ekuveliseni ngaphezulu okanye ngaphantsi akukho nzima. Kuyathakazelisa ukubonelela ngokuthelekisa amanye amanani, anje ngexabiso lesityalo elinye nelinye eSpain. Ukongeza, kukho izinto ezingafane zithathelwe ingqalelo xa uzithelekisa, ezinje ngomhlaba abahlala kuwo kunye nokusetyenziswa kwawo ngokufanelekileyo kufakelo.
Ndijonge kuphela kuthelekiso lwemveliso yombane kuba yeyona nto "sinokuyibona" ​​ukuba iza ekhaya kuthi ukuze sisebenzise amandla.
Ewe sinokuwathelekisa la mandla kunye nokunye kunye nezinye izinto ekufuneka sizithathele ingqalelo, ezinje ngomhlaba, iindleko zemveliso, ifuthe abalibangelayo, izibonelelo kunye nezinto ezingalunganga kunye nexesha elide njl.
Ingxaki, kuya kufuneka ugxile kwenye kuphela kuba ukuba sithetha ngayo yonke into, isinika ukubhala incwadi.
Ndiyabulisa uMario, enkosi ngezimvo zakho.
Loluphi uhlobo lwezothutho olusebenzayo kwi-EU?
ISpain iphakathi kwamazwe e-EU anciphisa ukukhutshwa kwayo okuncinci